Ka waran dilitaan la taaban karo
Mawdku waa nooc ka mid ah shey dhisme oo ay adeegsadaan dhinacyo badan oo dhismaha ah waqtigan xaadirka ah. Haddii uu jiro dilaac ku jira sibidhka inta lagu jiro dhismaha, marka dillaacyadu aad u ballaaran yahay, aad bay u fududahay in sababa baxsashada qaab dhismeedka la taaban karo, taas oo keenta hoos u dhaca waarta. Deganaanshaha la taaban karo ayaa si toos ah ula xiriirta amniga dhismaha. Sidaa darteed, waxaa aad muhiim u ah in la yareeyo burburka la taaban karo, kaas oo sidoo kale ah dhibaato aad uga walwalsan xisbiyada badan ee dhismaha.
Ficil ahaan, waxaan had iyo jeer isticmaalnaa kormeeraha iyo macdanta, taasi oo sifiican u buuxin karta baahiyaha shaqada, laakiin dhibaatada burburka la taaban karo lama hagaajin karo, sidaa darteed hadda waxaan u adeegsanaa wakiilo balaadhin dheeraad ah, oo si weyn u hagaajin kara awooda ka hortagga burburka la taaban karo iyo ka hortagga dildilaaca. . Marka la barbardhigo wakiilka yareynta iyo fiber isku-darka, isku-darka wakiilka ballaarinta galay la taaban karo waa qorshe qiime-jaban, gaar ahaan adeegsiga wakiilka balaarinta kaas oo asal ahaan qashinka warshadaha u ah shey ceeriin ah, kaasoo si weyn u wanaajinaya heerka isticmaalka kheyraadka. Waxyaabaha loo yaqaan 'vanadium iron slag' waa qashin adag oo ay ka soo baxaan qashin-qubka, kaas oo magdhow kara burburka, hagaajin kara xasilloonida shubka, oo leh firfircoonaanta fuuq-baxa. Sidaa daraadeed, iyada oo leh waxqabadkeeda ugu fiican, waxaa suurtagal ah in la beddelo wakiilka ballaarinta kalsiumaluminate-ka caadiga ah ee loo yaqaan 'Calcium sulphoaluminate wakiilka' oo noqota mid ku cusub warshadaha la taaban karo. Faa'iidooyinkiisa ayaa ah sida soo socota:
Marka ugu horeysa, sida iskudhafka agabka sibidhka, ferrovanadium slag waxay leedahay saameyn magdhaw oo muuqata. Marka loo isticmaalo dharbaaxada wajiga, waxay si wax ku ool ah u xakamayn kartaa burburka, yareyn kartaa dildilaaca la taaban karo oo ay sii wanaajin karto cimri dhererkiisa. Tixgelin buuxda oo ku saabsan qodobo kala duwan sida xoog isku buuqsan, iyadoo la adeegsanayo tijaabooyin saynis ah oo taxaddar leh, waxaa lagu cadeyn karaa in walxaha ku saleysan sibidhka ay leeyihiin isku darka fiican iyo iska caabbinta marka saamiga loo yaqaan 'vanadium iyo iron slag' ay tahay 15% ~ 20%.
Marka labaad, saamiga xoogga culus ee loo yaqaan 'compighter and tensile xoogga ratio' oo la taaban karo oo isku dhafan ashrey kaligiis ah, vanadium slag iyo ashkul duulista ayaa ka sarreeya tan la taaban karo ee sibidhka, gaar ahaan tan la taaban karo ee lagu darey vanadium slag iyo ashqaska duulista. Dhismaha dhabta ahi wuxuu muujiyaa in marka 20% vanadium birta iyo 10% ashrey loo adeegsado halkii laga isticmaali lahaa sibidhka oo lagu qarin lahaa shubka, saameynta dalabka ayaa ku wanaagsan labada mashruuc ee xoojinta guddiga.
Isticmaalka loo yaqaan 'ferrovanadium slag' si loogu beddelo sibidhka, ha ahaato hagaajinta waxqabadka agabka sibidhka, ama isticmaalka qashinka warshadaha, door weyn ayuu ka ciyaarayaa, ma aha oo keliya in laga hortago dildilaaca la taaban karo, laakiin sidoo kale si loo badbaadiyo ilaha loona ilaaliyo deegaanka.
Badeecada ugu horreysa ee Puguang Teqi waa 25-46m bam-gacmeed yar oo dhexdhexaad ah oo cabbirkiisu sarreeyo oo leh faa'iidooyin farsamo oo muhiim ah iyo waxqabadka qiimaha badan. Waxay had iyo jeer u hoggaansamaysaa fikradda adeegga "tayo qaadasho aaminaad culus, suuq hagaajin adeeg", waxayna ku dadaaleysaa inay dhisto shirkad wax soo saar leh oo caqli gal ah.